ပြဿနာ2- အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
အာရှတစ်ဝှမ်း Hitchhiking - Roving ခရု
မူပိုင် Evgeni Dinev
သင်မယ့်စောင့်ရှောက်ပါစေရန်တွန်းအားပေးအကြိမ်မည်မျှလိုအပ်ပြီလော ဒီတွန်းအားပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ထဲကနေလာကြပြီလော ကျွန်တော်တို့အတော်များများစိတ်ထိုကဲ့သို့သောတွင်းထဲသို့ကျလိမ့်မည်နှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမိ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်ပါသည် အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ သငျသညျကိုလှုံ့ဆော်သကဲ့သို့။ ကျနော်တို့လစဉ်လတိုင်းကဒီမှာသူတို့ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်း, တက်ဘလက်နှင့်ကွန်ပျူတာကိုဖတ်ပါ။ Subscribe သငျတို့သသစ်တစ်ခုပြဿနာလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဤကိစ္စကို2ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်နေပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
အိုင်ဗင် Belchev၏တည်ထောင်သူ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag
Boris, Marta နှင့်မြန်မာနိုင်ငံလူနှစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြောင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအာရှတစ်ဝှမ်းကိုအတူတကွခရီးသွားပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကုန်ရပြီ - လမ်းခရီးတလျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်လမ်းများတစ်လျှောက်တွင် hitchhiking ။
Nicky Little ကချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်စကိတ်စီးခြင်းအတွက်ချန်ပီယံ, စည်းကမ်းကြီးတွေလေ, ဆင်ခြေလျှောစတိုင်တဝက်-ပိုက်များတွင်အလွတ်နှင်းလျှောစီးအတွက်ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်။ သူကတရုတ်နိုင်ငံ X ကိုဂိမ်းမှာတတိယဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယနေ့တွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးခေတ်ပြိုင်ဂီတတီးဝိုင်းဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က Hayes & Y ကိုများမှာ! frontman နှင့်ဂစ်တာသမားနှင့် Rado Lozanov - - အုပ်စုများ၏ဦးဆောင်ဂစ်တာသမားဒီတစ်ခါလည်းအတိအကျက "Y ကို" ( "? အဘယ်ကြောင့်" ၏တစ်ဦး homophone) Blago Atanasov နဲ့ငါ့အင်တာဗျူး၏ချည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Venelin 24 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဘွဲ့ဘွဲ့နှင့် Business စီးပွားရေးမဟာဘွဲ့ရတယ်။ သူဟာသွားလာချစ်သောသူသည်နှင့်သူ၏အဓိကအကျိုးစီးပွားသမိုင်း, ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အသစ်မသိသောနေရာများကိုရှာဖွေတူးဖော်ရေးနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်။
ရို Daskalov စူပါတစ်ဦးလေယာဉ်မှူး, အင်ဂျင်နီယာ, ဒီဇိုင်နာနှင့်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အိပျမရတဲ့ည၏တစ်နှစ်ပြီးနောက်, အလုပ်ကြိုးစားမှုရလဒ်တွေကိုပေးသည်နှင့်အပြစ် CARS ၏အသင်းသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံအပြစ် R1 မိတ်ဆက်။
Gergana Rohner - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတစ်ဦးကတီထွင်ဖန်တီးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
Evgeni Dinev အားဖြင့်ဓာတ်ပုံများသဘာဝတရား၏ Bates အသက်ရှုပုံဖော်။ သူ ordindary မျက်စိအဘို့ဝှက်ထားရှုခင်းများ၏ search အတွက်လမ်းပေါ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျခမျြးအေးနှင့်အတူ pinched ပေမယ့်သဘောသဘာဝနိုးသောအခါအအတိအကျခဏစောင့်ကြည့်နေတဲ့အထွတ်အထိပ်အပေါ်ရှည်လျားနေထွက်ရှေ့တော်၌တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။
အသစ်ကပြဿနာ | | rating:5/ 30